Tsy Ara-dalàna Ny Fambolena Rongony An-Tavy Ao Meksika, Saingy Manoka-Baravarana Ho Amin’izany Ny Didin’ny Fitsarana Tampony · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Novambra 2015 17:06 GMT
Fambolena rongony raviny (Marijuana). Sary avy amin'ny A7nubis lisansa CC.
Nankatoavin'ny Fitsarana Tampon'ny Firenena (SCJN), fahefana ara-pitsarana ambony indrindra ao Meksika, ny fanapahan-kevitry ny Mpitsara Arturo Zaldívar Lelo de Larrea milaza fa tsy mifanaraka amin'ny lalàmpanorenana ireo andininy maromaro momba ny Lalàna Fanajana ny Fahasalamam-bahoaka ao amin'ny firenena, ary avy amin'izany no anomezana zo manokana ho an'ireo olona efatra mba hamboly sy hifoka rongony raviny ho azy ireo manokana.
Notontosaina tsy azon'ny besinimaro natrehina tao amin'ny Fitsarana Tampony misahana ny Heloka Bevava ny adihevitra mikasika ny fanapahan-kevitr'i Zaldivar. Nanazava ny lafiny sasany amin'ny didim-pitsarana ny gazety Jornada :
Milaza ny didim-pitsarana, izay hambara ampahibemaso amin'ny fotoana misokatra ho an'ny daholobe, fa tsy manaraka ny lalàmpanorenana Andininy faha-235, 237, 245, 247, ary ny 248 ny lalànan'ny Fanajana ny Fahasalamam-bahoaka, noho izy ireo mandrara ny Minisiteran'ny Fahasalamana tsy hanome fahazoan-dàlana “mba hanao zavatra ho an'ny tenany manokana ho fialam-boliny ny (mamafy, mamboly, mioty, mikarakara, mitazona an-tanana, mitondra an-dalana) rongony raviny (ny ditiny, vokatra, ary ny voa) sy ny zava- mahadomelina mandrisi-panahy THC manokana, izay fantatra ho rongony marijuana izy ireo.
Tsy midika, na izany aza, ny fanapahan-kevitra fa na iza na iza dia afaka mamboly rongony raviny, fantatra amin'ny anarana hoe “Mota” eny an-dalamben'i Meksika. Ny didim-pitsaran'ny Fitsarana Tampony koa tsy midika fanavaozana ankapobeny ny lalàna fananana rongony, izay mbola manan-kery. Amin'izao fotoana izao ny didim-pitsarana dia manome tombotsoa manokana ho an'ireo olona efatra nampiakatra fitsarana ambony nitaraina fa manohintohina ny zo manokan'izy ireo mba hiavaka amin'ny fiarahamonina ny lalàna, filazana izay voasoratra ao amin'ny lalàmpanorenana Meksikana ary arovan'ny didin'ny “Amparo”.
Mametraka modely vaovao eo amin'ny tantara Meksikana ny toe-draharaha, ary manokatra varavarana mankany amin'ny maha ​​ara-dalàna azy.
Tamin'ny teniny manokana, namehy ny fanapahan-kevitry ny Mpitsara Zaldívar Lelo de Larrea ilay mpanao gazety Carlos Puig:
Amin'ny teny Espaniola tsotsotra, tsy tokony ho heloka bevava ny mamboly rongony ao an-tanimboly.
Nomanina hotontosaina ny volana Oktobra ny raharaha Zaldívar, saingy nahemotra izany ary tsy tontosa raha tsy tamin'ny 4 Novambra izay natrehan'ireo Mpitsara rehetra amin'ny Sampana Heloka Bevava, ary nolaniana tamin'ny latsa-bato 4-1.
Ny foto-kevi-dehiben'ny fanapahan-kevitra dia resaka fahalalahan'ny isam-batan'olona amin'ny fanjifana rongony.
Tsara ny manamarika fa tsy manamaivana ny voka-dratsy ateraky ny fifohan'ny olon-dehibe rongony ny Fitsarana Heloka Bevava; na izany aza, dia tsy maintsy mankato izy fa miankina amin'ny tsirairay ny fananapahan-kevitra. Noho izany, mihevitra ny Fitsarana Avo fa ny safidy hanandrana manokana (sady tompon'andraikitra amin'izany) , na eo aza ny loza mety aterak'izany, dia mitoetra ho [fiainany manokana] sady arovan'ny zo hivelatra anaty fahalalahana amin'ny mahaizy azy.
Nofaranan'ny Zaldivar hoe:
Nihevitra ny Fitsarana Ambony fa tsy manaraka ny lalàmpanorenana ny fepetra ao amin'ny Lalàna momba ny Fahasalamam-bahoaka voalaza etsy ambony, ka manome ireo nampiakatra ny fitsarana ambony fahazoan-dalana avy amin'ny Minisiteran'ny Fahasalamana mba hanao zavatra ilaina ho amin'ny fampiasana rongony ho ala-voly. Amin'ny fanaovana izany , tsy tokony heverina fa nahavita heloka bevava manohitra ny fahasalamana ireo nampiakatra ny raharaha ambony raha voalaza ao amin'ny Lalàna momba Fahasalamam-bahoaka na ao amin'ny Fehezan-dalàna famaizana izany
Niteraka fanehoan-kevitra maro manerana ny fiarahamonina Meksikana ny fanapahan-kevitra, izay nampitahan'i Ernesto López Portillo amin'ny lalao baolina kitra:
Tahaka ny baolina kitra ihany ny rongony: manana ny heviny heveriny fa tsara kokoa noho ny an'ny hafa ny olona tsirairay, na fantany na tsia izay resahiny. Mety mbola tsy nandaka baolina na efa nanao izany imbetsaka izy ireo; na izany na tsy izany, mahafantatra bebe kokoa noho ny mpanazatra mahay indrindra manerantany izy ireo. Tahaka izany ihany koa ny amin'ny olona izay mpifoka rongony na angamba koa izay mbola tsy nanandrana izany, nefa dia tahaka ny manampahaizana manokana amin'ny lalànan'ny zava-mahadomelina izy ireo.
Lisa Sánchez, ao amin'ny The Mexican Times, kosa nankato ny fanapahan-kevitry ny fitsarana. Nanazava ny antony izy:
Nahoana ity didim-pitsarana ity no zava-dehibe ary nahoana no tokony hankatoavina? Voalohany, satria fotoana mety indrindra hampidirana ny fomba fijerin'ny zon'olombelona amin'ny politikan'ny zava-mahadomelina ny tetikasa ary hanaiky fa ny fandraràna dia mahatonga ny olona ho voasazy tsy amin'ny antony – izay manafoana ny fampiasana feno ny zon'izy ireo. Faharoa, satria ny didim-pitsarana nataon'ny Mpitsara Zaldivar dia manaiky ny adidin'ny fanjakana hiantoka ny fahasalamam-bahoaka sady koa mametra ny fahafahany hitsabaka amin'ny fiainana manokan'ny olona tsirairay, mandray azy ireo tokoa ho olon-dehibe.
Tao amin'ny tambajotra sosialy tahaka ny Twitter, nipoitra haingana ny adihevitra tsy mety tapitra amin'ity raharaha ity. Ohatra, Catalina Hernández, mpiserasera aterineto nalaina kisendrasendra, nilaza tena fa manohitra ny lalàna:
Tsara ho an'ireo Mpitsara, andao antenaina fa tsy hahatonga ho ara-dalàna ny rongony raviny izy ireo. Loza ho an'ny fahasalaman'ny zanatsika izany.
Naneho fihetseham-po tahaka izany ihany koa i Kique Hemphille:
Miala tsiny fa tsy miombo-kevitra amin'ny fanomezana ho ara-dalàna ny rongony noho ny antony fialam-boly aho Ary raha eny, dia tokony hisy lalàna manohitra izany.
Nizara fanehoan-kevitra amin'ny fanapahan-kevitr'i Zaldivar amin'ny zony hanapa-kevitra ho azy ny Mpahay Lalàna Fabián Aguinaco:
Raha misafidy ho faty ny fahafahana, maty miaraka aminy ny fiarahamonin'olobelona, ary tsy misy bokin-dalàna na fikarohana afaka hanova izany
Nandefa ity hafatra manaraka ity tamin'ny mpanjohy azy ilay mpilalao sarihmihetsika Luis Gerardo Méndez :
Mety ho andro manan-tantara ny ampitso. Hiady hevitra momba ny tsy fanamelohana ny rongony ny @SCJN. Ny fametrahana azy ho ara-dalàna no fiandohan'ny faran'ity ady ity.
Ny ady lazain'i Méndez dia manondro ny paikady ampiasaina ankehitriny hiadiana amin'ny fikambanan-jiolahy, izay nenjehin'ny governemanta Meksikana hatramin'ny faramparan'ny taona 2006. Niteraka ady mitam-piadiana anatiny ny paikady ka olona an'aliny no namoy ny ainy ary maro hafa no nanjavona. Manoloana izany toe-draharaha izany, manamarika fiovana eo amin'ny fivoaran'ny lalàna sy ny politikam-panjakana mifehy ny zava-mahadomelina ao amin'ny firenena ny fanapahan-kevitra noraisin'ny manampahefana ara-pitsarana ambony indrindra ao Meksika, indrindra mikasika ny tetikasam-panjakana vao haingana tsy hanameloka ny fampiasana manokana ny rongony raviny ao Etazonia.
Zara raha voavaha ny olana, na izany aza, ary mbola maro ireo fanontanina mipetraka. Manana herimpo hitarika ny firenena ao anatin'izany tari-dalana vaovao izany ve ny Fitsarana Tampony ? Sa hampanginin'ny fomba fanasaziana nentim-paharazana izay mamotsotra ny ady hahazo ny toerana voalohany?